Chautari Daily » ‘हिमेस पन्तको भोट १० लाखले बढी छ : जर्ज सन्तोष पन्त
‘हिमेस पन्तको भोट १० लाखले बढी छ : जर्ज सन्तोष पन्त
काठमाडौ ०२ चैत / कमेडी च्याम्पियनको पहिलो विजेता हिमेश पन्त भए संगै खबपुका समर्थकहरु वि’रोधमा उत्रिएका छन् । खड्ग बहादुर पुनका समर्थकहरु कार्यक्रम बाहिर विरोधमा उत्रिएर कार्यक्रम वि’रुद्द ना’राबाजी गर्न थालेका थिए । भोटि ङ्गका आधारमा विजेता बनाईएन भन्दै समर्थकहरुले वि’रोध जनाउन थालेका थिए ।
बाहुनलाई विजेता बनाईयो भन्दै जा’तिवादीको ना’रा समेत लगाएका थिए । भोटिङ्गको आधारमा खबपु विजेता हुनुपर्ने हो भन्ने तर्क सहित वि’रोधमा उत्रिएका थिए। यहि विषयमा कार्यक्रमका एक जज सन्तोष पन्तले भने, “हिमेश पन्तले खबपु भन्दा १० लाख भोट बढि ल्याएका छन् भने कसरी खबपु विजेता हुने ? यो पनि कुनै तर्क हुन सक्छ ?
धाँधली कार्यक्रम आयोजकले गरेको भए हामी जजहरु चुप बस्थ्यौ होला त ? यो वि’रोध वेकार हो । भोटिङ्ग कै आधारमा विजेता भएका हुन् हिमेश पन्त ।” यहि विषयमा कार्यक्रमका एक निर्माताले समेत कुनै किसिमको धाँधली नभएको तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । भोटिङ्गको लिष्ट आफुहरु संग सुरक्षित रहेको र चाहिएको बेला उक्त लिष्ट देखाउन पनि सकिने जनाएका छन् ।
प्रकाशित मिति २ चैत्र २०७६, आईतवार ०३:२९